Chinese, local business partner lose $14k to robbers – NewsDay Zimbabwe
Previous article Kaseke, ministry official clash over Mzembi
Next article Tsvangirai a proponent of thought leadership
Comment…Matikitivha, itayi wongororo yakasimba. Ndinoona paine aizivisisa nezve vanhu ava. Ivowo ngavaise mari kubhanga. Kana panguva yeUS$, muChina mudzi webwe mubhangi. Indians apo nepapo. Mari yavo vanochengeterepi? Ndisingakurudzire humbavha, vanhu ava ngavaise mari kubhanga. Ukatenga muzvitoro zvavo, nguva zhinji avapa RUSITI. Apo nepapo, vanonyora nepenzura. Zvepenzura zvinoenda kuZIMRA here?